ဆောင်းပါး > အနာဂတ် > သင့်ရဲ့ကောင်းကင်ဘုံရှင်နေအိမ်?
လူသိများသော ရှေးဓမ္မတေးသီချင်းနှစ်ပုဒ်က “လူမနေသော တိုက်ခန်းသည် ကျွန်ုပ်ကို စောင့်နေပြီ” နှင့် “ကျွန်ုပ်၏ပိုင်ဆိုင်မှုသည် တောင်ကြီးနောက်ကွယ်တွင် ရှိနေသည်” ဟု ဆိုထားသည်။ ဤသီချင်းစာသားများသည် သခင်ယေရှု၏ နှုတ်ကပတ်တော်များကို အခြေခံသည်– “ငါ့ခမည်းတော်၏အိမ်တော်၌ စံအိမ်များစွာရှိသည်။ အဲဒီလိုမှမဟုတ်ရင် 'မင်းအတွက် နေရာကို ပြင်ဆင်ဖို့ ငါသွားမယ်' လို့ ပြောမှာလား။ (ယော ၁4,2) ယေရှုသည် သေပြီးနောက် ကောင်းကင်ဘုံရှိ ဘုရားသခင့်လူမျိုးအတွက် ဆုလာဘ်ကို ပြင်ဆင်ပေးမည်ဟု ကတိပြုသောကြောင့် ဤအခန်းငယ်များကို အသုဘအခမ်းအနားများတွင် မကြာခဏကိုးကားလေ့ရှိသည်။ ဒါပေမဲ့ ယေရှုပြောချင်တာက ဒါပဲလား။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ထိုအချိန်က နှုတ်ခွန်းဆက်ခံရသူတို့အား မိန့်တော်မူလိုသည်များကို ထည့်သွင်းမစဉ်းစားဘဲ ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်၏ နှုတ်ကပတ်တော်တိုင်းကို ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာနှင့် တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်ရန် ကြိုးစားပါက မှားလိမ့်မည်။
ယေရှုမသေဆုံးမီညတွင်အထက်ခန်းမဟုခေါ်သည့်တပည့်များနှင့်အတူထိုင်ခဲ့သည်။ တပည့်တော်များတို့သည်သူတို့မြင်တွေ့ခဲ့ရာများကိုအလွန်အံ့အားသင့်ခဲ့ကြသည်။ ယေရှုသည်သူတို့၏ခြေကိုဆေးပေးပြီးသူတို့တွင်သစ္စာဖောက်သူတစ် ဦး ဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခဲ့ပြီးပေတရုသည်သူ့ကိုတစ်ကြိမ်သာမဟုတ်ဘဲသုံးကြိမ်အပ်နှံလိမ့်မည်ဟုကြေငြာခဲ့သည်။ သူတို့ပြောတာကိုမင်းမြင်ယောင်ကြည့်နိုင်လား။ “ ဒါကမေရှိယမဖြစ်နိုင်ဘူး။ သူကဆင်းရဲဒုက္ခ, သစ္စာဖောက်ခြင်းနှင့်သေခြင်းအကြောင်းပြော၏။ ငါတို့မူကားသူသည်ဘုရားသခင့်ရှေ့တော်၌ရဲရင့်ခြင်းအခွင့်ကိုရ။ ၊ ရှုပ်ထွေးမှု၊ စိတ်ပျက်အားငယ်မှု၊ ကြောက်ရွံ့မှု - ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောစိတ်လှုပ်ရှားမှုများ။ စိတ်ပျက်စရာမျှော်လင့်ချက်များ။ ထိုအခါယေရှုသည်ဤအရာအားလုံးကိုဆန့်ကျင်ခဲ့သည် -“ မစိုးရိမ်နှင့်။ ကျွန်တော့်ကိုယုံကြည်ပါ!" သူသည်ခြိမ်းခြောက်နေသောကြောက်မက်ဖွယ်မြင်ကွင်းနှင့်တပည့်များအားဝိညာဉ်ရေးကိုတည်ဆောက်လို။ “ ငါ့အဖေအိမ်မှာတိုက်ခန်းတွေအများကြီးရှိတယ်” ဟုဆက်ပြောသည်။
ဤစကားသည် တပည့်တော်တို့အား အဘယ်သို့ပြောသနည်း။ ခရစ်ဝင်ကျမ်းများတွင်အသုံးပြုသည့်အတိုင်း "ငါ့ခမည်းတော်၏အိမ်" ဟူသောဝေါဟာရသည် ယေရုရှလင်မြို့ရှိဗိမာန်တော်ကို ရည်ညွှန်းသည် (လုကာ၊ 2,49, ယော 2,16) ဗိမာန်တော်သည် ဘုရားသခင်ကိုဝတ်ပြုရန် ဣသရေလလူမျိုးအသုံးပြုသော ခရီးဆောင်တဲကို အစားထိုးခဲ့သည်။ တဲတော်အတွင်းတွင် (လက်တင်ဘာသာမှ တဲတော် = တဲ၊ တဲ) တွင် သန့်ရှင်းမြင့်မြတ်သော ကုလားကာဟု ခေါ်သော ထူထဲသော ကန့်လန့်ကာဖြင့် ပိုင်းခြားထားသော အခန်းတစ်ခုရှိသည်။ ဤသည်မှာ ဘုရားသခင် ၏ တဲတော်ဖြစ်သည် ( ဟေဗြဲလို “တဲတော်” ဆိုသည်မှာ “mishkan” = “ကျိန်းဝပ်ရာ” သို့မဟုတ် “တဲတော်”))။ ဘုရားသခင်ထံတော်မှ သတိပြုမိလာစေရန် ဤအခန်းကို ယဇ်ပုရောဟိတ်မင်းတစ်ပါးတည်းသာ ဝင်ခွင့်ပြုရန် တစ်နှစ်တစ်ကြိမ် သီးသန့်ထားရှိသည်။
ထို့အပြင် “နေရပ်” သို့မဟုတ် “နေရပ်” ဟူသော စကားလုံးသည် လူနေထိုင်ရာအရပ်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရပြီး “ရှေးဂရိ (ဓမ္မသစ်ကျမ်း) ဘာသာစကား) သည် ယေဘူယျအားဖြင့် သတ်မှတ်နေရာတစ်ခုအတွက် မရပ်တည်ဘဲ ခရီးတစ်ထောက်နားရန်၊ ရေရှည်တွင် သင့်အား မတူညီသောနေရာသို့ ပို့ဆောင်ပေးသည်။  သေပြီးနောက် ကောင်းကင်ဘုံ၌ ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိခြင်းမှလွဲ၍ အခြားအရာတစ်ခုခုကို ဆိုလိုလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ကောင်းကင်ဘုံသည် လူတို့၏နောက်ဆုံးနှင့် နောက်ဆုံးသောနေရာအဖြစ် မှတ်ယူလေ့ရှိ၏။
ယခု ယေရှုသည် တပည့်တော်များအတွက် နေစရာနေရာကို ပြင်ဆင်ပေးမည်ဟု မိန့်တော်မူခဲ့သည်။ သူဘယ်သွားရမလဲ သူ့လမ်းကြောင်းက သူ့ကို ကောင်းကင်ဘုံကို တည့်တည့် ပို့ဆောင်ဖို့ မဟုတ်ဘဲ အထက်ခန်းကနေ လက်ဝါးကပ်တိုင်အထိ နေအိမ်တွေ ဆောက်ဖို့ပါ။ သေခြင်းနှင့် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်အတူ အဘ၏အိမ်၌ မိမိနေရာအရပ်ကို ပြင်ဆင်ရပါမည် (ယော ၁၊4,2) “အရာရာဟာ ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာပဲ ရှိနေတယ်။ ဖြစ်ပျက်တော့မည့်အရာသည် ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းပုံရသော်လည်း ၎င်းသည် ကယ်တင်ခြင်းအစီအစဉ်၏ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်သည်။" ထို့နောက် ပြန်လာမည်ဟု ကတိပေးခဲ့သည်။ ဤအခြေအနေတွင် သူသည် Parousia (ဒုတိယအကြိမ်ကြွလာခြင်း) ကို ရည်ညွှန်းပြောဆိုပုံမပေါ်ပေ (အမှန်ပင် ကျွန်ုပ်တို့သည် တရားစီရင်ရာနေ့တွင် ခရစ်တော်၏ဘုန်းအသရေပေါ်ထွန်းခြင်းကို မျှော်လင့်နေသော်လည်း၊ သုံးရက်မြောက်သောနေ့၌ ထမြောက်၍ သေခြင်းသို့ ပြန်ရောက်လေ၏။ ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင် သူသည် သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်၏ပုံစံဖြင့် နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လာခဲ့သည်။
"... ငါလာ၍ သင်တို့ရှိရာသို့ ပို့ဆောင်မည်အကြောင်း ငါလာဦးမည်။" (ယော၊ ၁4,3) သခင်ယေရှုက မိန့်တော်မူသည်။ ဒီနေရာမှာ သုံးတဲ့ "ငါ့အတွက်" ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို ခဏလောက် နားလိုက်ကြရအောင်။ ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းပါ စကားလုံးများကဲ့သို့ တူညီသောသဘောဖြင့် နားလည်ရမည်ဖြစ်သည်။ 1,1သားတော်(နှုတ်ကပါဌ်တော်)သည် ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိတော်မူကြောင်း ကျွန်ုပ်တို့အား မည်သူပြောသနည်း။ ၎င်းသည် "to" နှင့် "at" နှစ်မျိုးလုံးဟုအဓိပ္ပာယ်ရသောဂရိ "pros" သို့ပြန်သွားသည်။ ခမည်းတော်နှင့် သားတော်ကြား ဆက်ဆံရေးကို ဖော်ပြရန် ဤစကားလုံးများကို ရွေးချယ်ရာတွင်၊ သန့်ရှင်းသော ဝိညာဉ်တော်သည် ၎င်းတို့၏ ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကို ညွှန်ပြနေသည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၏ဘာသာပြန်ကျမ်းတစ်ခုတွင် အခန်းငယ်များကို အောက်ပါအတိုင်းပြန်ဆိုထားသည်– “အစအဦး၌ နှုတ်ကပတ်တော်ရှိ၏။ နှုတ်ကပတ်တော်သည် ဘုရားသခင်နှင့်အတူရှိပြီး အရာအားလုံးတွင် ဘုရားသခင်နှင့်တူသည်... » 
ကံမကောင်းစွာဖြင့်လူများစွာကဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအဝေးမှစောင့်ကြည့်နေသူတစ် ဦး အဖြစ်ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိသည့်နေရာတစ်နေရာအဖြစ်ရှိနေသည်ဟုယူဆကြသည်။ “ ငါ့ကို” နှင့်“ မှာ” ဟူသောစကားလုံးများသည်အလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဘုရားသခင့်ဖြစ်တည်မှုလက္ခဏာများကိုထင်ဟပ်စေသည်။ ဒါဟာပါ ၀ င်မှုနဲ့ရင်းနှီးမှုအကြောင်းပါ။ ၎င်းသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်ဆက်ဆံရေးအကြောင်းဖြစ်သည်။ နက်နဲနက်နဲတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီနေ့သင်နဲ့ငါနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်နေသလဲ။ ထိုမေးခွန်းကိုကျွန်ုပ်မဖြေဆိုမီဗိမာန်တော်ကိုအတိုချုပ်ပြန်လည်သုံးသပ်ပါ။
သခင်ယေရှုသေဆုံးသောအခါ ဗိမာန်တော်၏ ကုလားကာသည် နှစ်ခြမ်းကွဲသွားသည်။ ဤအက်ကွဲမှုသည် ၎င်းနှင့်ဖွင့်ထားသော ဘုရားသခင်ထံတော်သို့ ဝင်ရောက်ခြင်းအသစ်ကို ကိုယ်စားပြုသည်။ ဘုရားကျောင်းက သူ့အိမ်မဟုတ်တော့ဘူး။ ဘုရားသခင်နှင့် လုံးလုံးလျားလျား ဆက်ဆံရေးအသစ်သည် လူသားတစ်ဦးစီအတွက် ယခုပွင့်နေပြီဖြစ်သည်။ ဧဝံဂေလိသမ္မာကျမ်းစာဘာသာပြန်ကျမ်း အခန်းငယ် ၂ တွင် ကျွန်ုပ်တို့ဖတ်ရသည်– “ငါ့ခမည်းတော်၏အိမ်တော်၌ စံအိမ်တော်များစွာရှိသည်။” သန့်ရှင်းရာဌာနတော်တွင် လူတစ်ဦးတည်းသာ နေရာလွတ်ရှိခဲ့သော်လည်း ယခုအခါတွင် အစွန်းရောက်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် မိမိအိမ်၌ရှိသော လူအပေါင်းတို့အတွက် နေရာလွတ်ကို အမှန်ပင် ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ သားတော်သည် လူ့ဇာတိခံယူပြီး ကျွန်ုပ်တို့အား သေခြင်းမှရွေးနှုတ်ကာ အပြစ်၏ဖျက်ဆီးနိုင်စွမ်းကို ခမည်းတော်ထံပြန်လာကာ ဘုရားသခင်ထံတော်၌ လူသားအားလုံးကို သူ့ထံတော်သို့ ဆွဲငင်ခဲ့ခြင်းကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည် (ယော၊ ၁။2,32) ထိုညနေတွင်ပင် ယေရှုက “ငါ့ကိုချစ်သောသူသည် ငါ့စကားကို စောင့်ရှောက်လိမ့်မည်။ ငါ့အဘသည် ချစ်တော်မူသဖြင့်၊ ငါတို့သည် သူ့ထံသို့လာ၍ သူနှင့်အတူ အိမ်ဆောက်ကြလိမ့်မည်။” (ယော၊ ၁4,23) အခန်းငယ်2တွင်ကဲ့သို့ပင် ဤနေရာတွင် "နေရာများ" ကို ပြောပါသည်။ အဲဒါ ဘာကိုဆိုလိုသလဲ မင်းမြင်လား။
ကောင်းမွန်သောအိမ်တစ်လုံးနှင့်မည်သည့်အကြံဥာဏ်များကိုသင်ပေါင်းသင်းပါသနည်း။ ငြိမ်းချမ်းရေး၊ တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှု၊ ဝမ်းမြောက်မှု၊ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှု၊ ညွှန်ကြားချက်၊ ခွင့်လွှတ်ခြင်း၊ သို့သော်သခင်ယေရှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အပြစ်ဖြေခြင်းကိုခံယူရန်သာမက၊ ကောင်းမွန်သောနေအိမ်နှင့် ပတ်သတ်၍ ဤအတွေးအမြင်အားလုံးကိုမျှဝေရန်နှင့်သူနှင့်သူ့ဖခင်နှင့်အတူထိုဘ ၀ ကိုတွေ့ကြုံခံစားစေရန်မြေကြီးသို့ကြွလာတော်မူသည်။ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည် ဦး ဆောင်သည်။
ယေရှုကိုယ်တော်တိုင် ခမည်းတော်နှင့် ချိတ်ဆက်ပေးသည့် မယုံနိုင်လောက်အောင် ထူးခြားပြီး ရင်းနှီးသောဆက်ဆံရေးကို ယခုလည်း ကျွန်ုပ်တို့အား ဖွင့်ဆိုထားသည်– “သင်တို့သည် ငါရှိရာအရပ်၌ ရှိစေခြင်းငှာ” ဟူသော ကျမ်းချက်၌ ဖော်ပြထားသည်။ 3. ယေရှုသည် အဘယ်မှာရှိသနည်း။ “ခမည်းတော်နှင့် ရင်းနှီးသောမိတ်သဟာယဖွဲ့ခြင်း” (ယော 1,18သတင်းကောင်း သမ္မာကျမ်းစာ) သို့မဟုတ် ဘာသာပြန်ဆိုချက်အချို့တွင် “ခမည်းတော်၏ရင်ခွင်၌” ဟုဆိုသည်။ သိပ္ပံပညာရှင်တစ်ဦးက ဤသို့ဆိုသည်– “တစ်စုံတစ်ယောက်၏ရင်ခွင်၌ အနားယူခြင်းသည် မိမိရင်ခွင်၌ လှဲလျောင်းနေရန်၊ သူ၏ အနက်ရှိုင်းဆုံး ချစ်ခင်မြတ်နိုးအပ်သော အရာဝတ္ထုအဖြစ် မြတ်နိုးခံရရန်၊ သို့မဟုတ် သူ၏ရင်ခွင်ထဲတွင် သူငယ်ချင်းဖြစ်ရန် ဆိုရိုးစကားအတိုင်းပင်။  ထိုနေရာ၌ ယေရှုရှိတော်မူ၏။ ငါတို့ အခုဘယ်မှာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်နှင့် သက်ဆိုင်သူများဖြစ်သည် (ဧဖက် 2,6)!
သင်ဟာခက်ခဲပြီးစိတ်ဓာတ်ကျစရာကောင်းတဲ့အခြေအနေကိုအခုအချိန်မှာရောက်နေပြီလား။ သခင်ယေရှု၏နှစ်သိမ့်မှုပေးသောစကားများသည်သင့်အားကိုင်တွယ်ထားကြောင်းသေချာသည်။ တစ်ချိန်ကတပည့်တော်များအားခွန်အားရှိစေ။ အားပေးတိုက်တွန်းလိုသကဲ့သို့သင်တို့ကိုလည်း“ စိတ်မပူပါနဲ့! ကျွန်တော့်ကိုယုံကြည်ပါ!" သင်၏စိုးရိမ်ပူပန်မှုများကသင့်ကိုဝန်ပိစေပြီးယေရှုကိုယုံကြည်ကိုးစားပါ၊ သူပြောသောအရာများနှင့်သူမဖော်ပြသည့်အရာများကိုမစဉ်းစားပါနှင့်။ သူတို့ရဲ့သတ္တိရှိရမယ်လို့မပြောပါဘူး။ ၎င်းသည်သင့်အားပျော်ရွှင်မှုနှင့်ကြွယ်ဝမှုဆီသို့ခြေလှမ်း (၄) ဆင့်ကိုအာမခံမထားပါ။ သူသည်သင့်အားကောင်းကင်အိမ်ကိုပေးမည်ဟုမကတိပြုပါ။ သူမသေဆုံးခင်အထိသင်ရှာမတွေ့နိုင်ပါ။ ၎င်းသည်သင်၏ဆင်းရဲဒုက္ခအားလုံးကိုခံထိုက်ပါသည်။ ၎င်းအစားသူသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဘုရားသခင်နှင့်သူ၏အိမ်၌ရှိသောအသက်နှင့်ခွဲခွာစေနိုင်သည့်အရာမှန်သမျှကိုဖျက်သိမ်းရန်ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုသူကိုယ်တိုင်ယူမှတ်ရန်၊ လက်ဝါးကပ်တိုင်ပေါ်တွင်မိမိကိုယ်ကိုသံသယဖြစ်စေရန်လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင်အသေခံခဲ့သည်ဟုသူရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြထားသည်။
ဒါပေမဲ့အဲဒါတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ခမည်းတော်၏သားတော်၊ သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နှင့်ဘုရားသခင့်အသက်တာ၌မျက်နှာချင်းဆိုင်မျက်နှာချင်းဆိုင်ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်ရန်သင်သည်ဘုရားသခင်၏မေတ္တာတော်ဖြင့်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ပါ ၀ င်သည်။ သူသည်သင့်အားသူနှင့်သူ၏ရပ်တည်မှုအားလုံးကိုသူနှင့်ဖြစ်စေလိုသည်။ သူက“ မင်းငါ့အိမ်ထဲမှာနေနိုင်အောင်ငါမင်းကိုငါဖန်ဆင်းခဲ့တယ်” လို့ပြောခဲ့တယ်။
အဖဘုရား၊ ကျွန်ုပ်တို့နှင့်သားတော်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆန့်ကျင်။ အိမ်သို့ပို့ဆောင်ပေးသောသင်၏သားတော်၌ကျွန်ုပ်တို့ကိုတွေ့ဆုံခဲ့သည့်သင့်ကိုကျေးဇူးတင်ချီးမွမ်းပါ၏။ သေခြင်းနှင့်အသက်ရှင်ခြင်း၌သူသည်ကျွန်ုပ်တို့အပေါ်ထားသောသင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုကြွေးကြော်။ ကျွန်ုပ်တို့အားကျေးဇူးပြုခြင်း၊ ခရစ်တော်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုသုံးဆောင်သောငါတို့ရှင်ပြန်ထမြောက်သောအသက်တာကိုလည်းရှင်ကြပါစို့။ သူ၏ခွက်မှသောက်သောသူများသည်သူတစ်ပါးတို့၏အသက်ကိုပြည့်စေတတ်ကြ၏။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်အားဖြင့်ဉာဏ်အလင်းရရှိသောငါတို့မူကားလောက၏အလင်းဖြစ်ကြ၏။ ငါတို့ မှစ၍ သားသမီးအပေါင်းတို့သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့်ကမ္ဘာအဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးတော်မူစေခြင်းငှါ၊ အာမင် 
 NT Wright, Surprised by Hope, p. 150
 Rick Renner, Dressed to Kill, p. 445; သတင်းကောင်း သမ္မာကျမ်းစာမှ ဤနေရာတွင် ကိုးကားဖော်ပြထားသည်။
 Edward Robinson, A NT of the Greek and English Lexicon, p. 452။
 Michael Jinkins မှ ကိုးကား၍ ဓမ္မပညာဆိုင်ရာ ဖိတ်ကြားချက်၊ p. 137 ၏ Eucharistic Liturgy အရ သန့်ရှင်းသော မိတ်သဟာယ ပြီးနောက် ဆုတောင်းခြင်း။